Ifulethi Elibukekayo lakamuva e-Bastia ne-Sea View - I-Airbnb
Ifulethi Elibukekayo lakamuva e-Bastia ne-Sea View
Bastia, Corse, i-France
Ifulethi elihle kakhulu lakamuva (2016) le-45Mwagen ngesitayela sesimanje nesemboni, elikhanya kakhulu, eline-air-conditioned kanye ne-Wi-Fi
Ithala lokubuka ulwandle elingu-13Mwagen lizokuvumela ukuba uchithe izikhathi ezimnandi.
Ilungele izivakashi ezingu-4.
Itholakala emnyango we-Bastia endaweni ethulile ngemizuzu engu-3 uhamba ngemoto ukusuka olwandle, imizuzu engu-5 uhamba ngemoto ukusuka edolobheni kanye nechweba nemizuzu engu-15 ukusuka esikhumulweni sezindiza.
Umzila webhasi nesitimela esiseduze.
Ifulethi esitezi sesithathu elinekheshi nendawo yokupaka yamahhala.
Igumbi elivulekile elinombhede olala abantu ababili (160x200), ikhabethe lodonga nendawo yokusebenzela (ideski).
Indawo yokuhlala enombhede wosofa (125x200) ivulekele ikhishi elinakho konke (umshini wokugeza izitsha, i-microwave, uhhavini kanye nezinto zikagesi ezincane).
Igumbi lokugezela elivulekile, elinomshini wokomisa amathawula, umshini wokomisa izinwele, nomshini wokuwasha.
Leli fulethi elingu-45M litholakala endaweni enokuthula imizuzu engu- ukusuka olwandle futhi linendawo yokungena edolobheni lase-Bastia. Inkaba yedolobha iyibanga lemizuzu engu-5 uma uhamba ngemoto.
Kubantu abathanda ukuhamba ngezinyawo, uzothola uhambo lwe-E Nivere oluseduze, olunikeza umbono omangalisayo wayo yonke i-Bastia uma usufike phezulu (bheka isithombe). Ungase futhi uthathe uhambo usuka edolobhaneni lase-Furiani okukuthatha emizileni ecacile ukuze ufinyelele isonto elimangalisayo nelihle lase-Furiani.
Eminye imisebenzi endaweni ihlanganisa: i-windsurfing, imidlalo yamanzi, ukushushuluza emanzini, i-tennis, ukubhukuda, i-snorkeling, i-scuba diving, ukuhamba ngomkhumbi, i-rollerblading, ukucaca, i-rafting, i-paragliding, ukuhamba ngebhayisikili entabeni, i-jet skiing, i-skating, ukuzingela, ukugibela amahhashi, ukudoba, igalofu kanye nebhayisikili.
Ibhishi lase-Arinella lingamamitha angu-500 ukusuka efulethini (bheka isithombe). Uzothola ama-bar nezindawo zokudlela ezinhle kakhulu ngaphakathi kwamakhilomitha angu-1.5 kanye nesikhungo sokuthenga ngaphakathi kuka-100 m. Amathafa e-Asco angamakhilomitha angu-60 ukusuka efulethini. I-Golf de Lucciana itholakala amakhilomitha angu-18 ukusuka efulethini.
Idolobha lase-St Florent liqhele ngemizuzu engu-20 ngemoto. Leli dolobha liyikhaya lamabhishi amahle kakhulu njengebhishi lase-Lodu noma ibhishi lase-Saleccia (bheka izithombe) elihlukaniswe phakathi kwamabhishi amahle kakhulu e-France.
Imizila eminingi yokuqwala izintaba ayifinyeleleki kude nefulethi, unganqikazi ukuthi sizokweluleka!
Eduze kwendlu, sizokwenza konke esingakwenza ukuze siqinisekise ukuthi izivakashi zamukelwa ezimweni ezingcono kakhulu. Ukulalela, sizokweluleka ngezindawo ezihlukahlukene nemisebenzi ongayithola enkabeni yesiqhingi sethu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bastia namaphethelo